Fitsipika 21 momba ny paikadin'ny haino aman-jery sosialy mahomby | Martech Zone
Talata, Novambra 19, 2013 Talata, Novambra 19, 2013 Douglas Karr
Tsy tiako ny teny hoe "fitsipika" raha ny resaka Marketing amin'ny Social Media, saingy mino aho fa manana traikefa sy fanadihadiana tranga ampy hahafantarana izay tena nanaovan'ireo orinasa asa lehibe amin'ny fampiasana media sosialy izahay ary tena notsofina. Ity infographic ity dia manao asa mahafinaritra amin'ny fametrahana fanantenana sy torolàlana sasany momba ny fampivoarana ny paikadin'ny media sosialy.
Toy ny zavatra hafa rehetra, misy ny lalàna tsy voasoratra tafiditra amin'ny varotra media sosialy. Adidy ny tsirairay hanaraka ireo fitsipika ireo, fa ireo izay vaovao amin'ny lalao dia mety tsy hahatratra ny fototra. Ireto misy fitsipika 21 tsy voasoratra momba ny marketing amin'ny haino aman-jery sosialy izay natao hamoronana fototra matanjaka ho an'ny fampielezana haino aman-jery sosialy.
Ny infographic dia novolavolain'i Social Metrics Pro, plugin WordPress izay manara-maso ny sioka, ny tiana, ny tsimatra, ny + 1 ary maro hafa avy amin'ny Dashboard WordPress anao!
Tags: Sary torohayfitsipiky ny media sosialysary amin'ny haino aman-jery sosialylalànan'ny media sosialy
Sintomy ny maodely maherin'ny 100 amin'ny $ 59
Dec 5, 2013 amin'ny 2: 50 AM
Lahatsoratra tena tsara ……. Misaotra an'ity fampahalalana mahasoa ity.
Serivisy SEO eo an-toerana
Jan 9, 2014 ao amin'ny 5: 19 AM
Lahatsoratra tena tsara ho fantatra momba ny "Infographic: Fitsipika 21 ho an'ny paikadin'ny media sosialy mahomby", misaotra anao amin'ny fampahalalana ..
Jan 9, 2014 ao amin'ny 5: 51 AM
Eny ary, tena mandeha tokoa ny haino aman-jery satria ny olona rehetra manerantany dia mahita an'izao tontolo izao manipy filozofia marina sy lisitra zaraina ..
Jan 25, 2014 ao amin'ny 7: 21 AM
Bilaogy tsara, navoaka tamin'ny fomba mamorona tokoa hahalala.
Mar 1, 2016 amin'ny 11: 54 AM
Lahatsoratra Excelent, azoko atao ve ny mandika ny infografikao ary mamoaka azy?
Ao amin'ny faritra misy mpandahateny espaniola aho ka tsara raha manana izany amin'ny tenindrazantsika.
Mar 1, 2016 ao amin'ny 12: PM PM
Mazava ho azy! Aza hadino ny manome voninahitra ny mpanonta voalohany fa tsy izaho.